maanta waa in la jeegareeya waxa yaalla suuqyadeena.
Friday February 07, 2020 - 18:45:49 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Ummad kastoo aduunyada ku nool waxa ay biriyootiga saaraan cuntooyinka iyo daawooyinka yaal suuqyadooda.
Taas oo ku tacaluqda xaallada iyo caafimaadka mustaqbalkooda ,waana shay masiiraya oo ay iska xilsaaraan horgalayaasha iyo masuuliyiinta kuwoogìi loo igmaday.taas oo ay u kuur gallaan wakhtiyadooda badankìooda
Balse wadankeena gaar ahaan hargaysa in badan lagama war hayo waxa kasoo dega ayboodha taas oo aan in badan la ogeyn waxa inoo imaada.
Balse inkastoo dhawaan laqabtay dawooyin billaa date oo dawladeenu ku amaanantahay sheekadanbaan ku xasuustee.
Maalin dhawayd ayaan is idhi wax kasoo iibso hargaysa,anigoona aaday suuqa,sheekadanbaa na dhex mardhexwaar waar kolgateyadan waa imisa nooc waa dhowr nooc,colgate waa imisa? Waa imisa,wuxuu iigu jawaabay saddex dollar 3$ bal keen idhi deedna is idhi date eeg,kabase waayay waar waa bilaa date!!!igu yidhi waar waa mid farasiiska inooga timidee oo looguma talla gallin inay dhacdo,ninkii is fahmi waynay anigoo yaabaan idhi waar tan bilaa date iga daayoo isii tan date leh ee masar ka timi markaasan ka iibsaday anigoo yaaban markaasan is wayddiiyay yaa dalkeena u maqan haddaba waxaan soo jeedinayaa in loo soo jeedsado la jeegareeyo waxa suuqa yaalla.